ကြယ်ပြာ| September 15, 2012 | Hits:7,938
| | ရန်ကုန်တိုင်း ဥက္ကံမြို့ တိုက်နယ် ဆေးရုံ (ဓာတ်ပုံ – ကြယ်ပြာ / ဧရာဝတီ)
ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်များ၏ နောက်ကွယ်တွင် ကြိုးကိုင်သူများရှိဟု ဆိုကျောင်းအပ်ချိန် လာဘ်စားမှုနှင့် ကျောင်းကျူရှင်ကိစ္စ မိဘက မတိုင်လျှင် အရေးယူရန်ခက်မြောက်ပိုင်း ABSDF တွင် ကိုထွန်းအောင်ကျော် အသတ်ခံခဲ့ရမှု မိခင်ဖြစ်သူက အမှုဖွင့်ဝန်ကြီးပိုင်သရက်ခြံ မီးရှို့မှုဖြင့် ဖမ်းထားသည့် ရွာသားများ ပြန်လွှတ်ရေး တောင်းဆိုအခြေခံဥပဒေကို NLD ပြင်လျှင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ထောက်ခံမည်ဟု ဦးအောင်သောင်းပြော နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> swe htwe September 15, 2012 - 8:34 pm	The truth can’t be hidden. Remove the person who didn’t care the people.!!!